Ny fahaiza-manenona Dhimal · Global Voices teny Malagasy
“Sarotra fanaovana azy ary vitsy no mahavita azy araka ny tokony ho izy,”
Voadika ny 10 Novambra 2021 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Ελληνικά, English
Chandra Kala mamendraka maard, fangarom-bary sy rano, eo amin'ny kofehy mba hampatanjaka azy ireny be kokoa. Saripikan'i Sudin KC via Record Nepal. Nahazoana alalana.
Ity lahatsoratr'i Aishwarya Baidar ity dia navoaka voalohany tao amin'ny The Record (Nepal); misy endrika novaina navoaka indray eto ambany ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty nifanaovana tamin'ny Global Voices..
Mialokaloka amin'ny hafanan'ny masoandron'i Tarai ao amin'ny tranobongo vita volotsangana sy vifotsy, nametaka ny solomasony eo an-tampon'ny handriny kentrona eo am-pandaminany kofehy i Chandra Kala Dhimal, mampiditra tsirairay avy isaky ny lempona lalin'ny fitaovam-panenomana. Atsofony ao anaty lavaka iray eo ambanin'ny fanenoman-damba ny tongony, ka misintona singam-bararata roa amin'ny voditongony. Miara-mihetsika ny tanany, manenona haingana hampikambana ny kofehy. Mipoitra toy ny tselatra manavatsava ny sandriny manifinify ny lalan-dra eo am-panindrina ny kofehy mitsangana sy mitsivalana. Miasa isan'andro mandritra ny ora maro amin'ny fitaovam-panenomana nentim-paharazana vita amin'ny hazo ity olona 65 taona ity, toy ny mihira ny fikatrokatroka re manerana ny tranobongo. Iray amin'ireo mpanenona vitsy velona farany avy amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany Dhimal ao Nepal izay mbola mitazona ny fanenomana hazo nentim-paharazana izy.
“Sarotra ny fanaovana azy ary vitsy aminay ao amin'ny vondrom-piarahamonina Dhimal ihany no mahavita izany araka ny tokony ho izy,” hoy i Chandra Kala, feno hatsembohan'ny akanjony tereny amin'ny lamosiny. “
Satria lasa mora hita hovidiana ny milina fanenomana maoderina izay tsotra kokoa sy azo ampiasaina mandritra ny taona, dia mihasarotra ny mahita ny fitaovana fanenomana nentim-paharazana amin'ny fanenomana akanjom-poko, toy ny karazana iasan'i Chandra Kala.
Roambinifolo taona i Chandra Kala fony nampianatra azy “baojinka” ny reniny, ny fomba fanenomana kofehy. Matetika izy no nodarohan’ny reniny rehefa tsy nankatò. “Raha maty aho, iza no hampianatra anao hanenona?” hoy ny reniny taminy.
Nodimandry ny reniny taoriana kelin'ny faha-14 taonan'i Chandra Kala saingy tamin'izany fotoana izany, ny fanenomana petani, akanjo nentim-paharazana Dhimal, no efa lasa loharanom-bolany voalohany noho ny tsy mbola nahazoany fianarana.
“Nianatra nanenona tamin’ny reniko aho, dimampolo taona mahery lasa izay”, hoy ny fanazavan’i Chandra Kala, “nefa tsy nisy zanako te hianatra ireo fahaiza-manao ireo. Lazain’izy ireo fa mila ezaka be loatra izany.”
Tandindomin-doza mety ho faty ankehitriny ny zavakanto fanenoman'ny Dhimal, nifandovan'ny razana mifandimby. Tahaka ny zanak'i Chandra Kala, izay mpiasa ao Kathmandu, renivohitra Nepaley, nanao asa hafa ny ankamaroan'ny tanoran'ny vondrom-piarahamonina Dhimal. Na dia ireo manao asa fanenomana aza lasa nampiasa milina maoderina.
“Aleoko […] ny milina satria sarotra ny miasa ny fanenomana nentim-paharazana ary tsy azo ampiasaina mandritra ny fotoan'orana satria feno ranonorana ny lavaka,” hoy Ranga Maya Dhimal, 54 taona, monina ao Dapgachi, tanàna vazimba izay fonenan'ny vondrom-piarahamonina Dhimal ao Damak. “I Chandra Kala no hany tokana eto aminay mbola mahay mampiasa ny fitaovana fanenomana nentim-paharazana.”
Sarin'i Chandra Kala Dhimal tamin'izy mbola tanora. Sary nopihan'i Sudin KC via Record Nepal. Nahazoana alalana.
Araka ny filazan'i Ranga Maya dia afaka nanenona petani 10 hatramin'ny 12 isan-taona tamin'ny fanenoman-damba nentim-paharazana izy saingy amin'izao dia efa afaka mamokatra 16 hatramin'ny 20 amin'ny fitaovam-panenomany vaovao.
Manenona sy manao petani, akanjo mainty hatreo amin'ny kitrokely ahitana tsipika mivolom-boasary sy fotsy mampiavaka ny foko Dhimal, manodidina ny andilana, ny vehivavy Dhimal. Mandany dimy andro i Chandra Kala raha manenona petani tokana ary mahavita efatra ka hatramin’ny dimy ao anatin’ny iray volana—saingy tsy miasa mandritra ny taona izy. Satria eny an-kalamanjana ny ankamaroan'ny fanenon-damba, mazàna feno rano ny lavaka, mahatonga ny fitaovana ho tsy azo ampiasaina.
Tsara sy mateza kokoa ny petani voatenona tamin’ny fomba nentim-paharazana, hoy i Ranga Maya. Ny akanjo tenona nentim-paharazana dia mazàna haharitra ela kokoa, ka mahatonga azy ireo ho safidy maharitra kokoa manoloana ny safidy maoderina. Ho an'ny foko Dhimal, izay manana andriamanitra monina ao amin'ny zavaboary, dia very miaraka amin'ny fomba fanenoman'ny foko ihany koa ny lafiny iray amin'ny fiarahan'izy ireo maharitra maharitra amin'ny zavaboary.
“Ny dingana dia manomboka amin'ny famafazana ny voan'ny volory, fantatra amin'ny anarana hoe solai amin'ny fitenim-paritra Dhimal, izay nolovaina tamin'ny razambenay,” hoy i Ranga Maya. Otazana ny raviny rehefa lehibe ny zavamaniry, ary ahandroana amin'ny rano misy kofehy mba handokoana azy. Marevaka ary matanjaka kokoa ny kofehy voaloko. Rehefa maina dia esorina ary atao antsody (fr: bobine). Vao mainka mateza kokoa izy ireo rehefa arotsaka ao anaty ranom-bary. Mety haharitra efatra andro eo ho eo ny dingana manontolo, ary avy eo dia tenomina ho petani.
Sarintavan'i Chandra Kala Dhimal. Sary nopihan'i Sudin KC via Record Nepal. Nahazoana alalana.
Maharitra holovainjafy ny dingana manontolo, izay nampitaina isa-taranaka ao amin'ny vondrom-piarahamonina Dhimal, mampiasa ny harena voajanahary tsy amin'ny fanenomana ihany fa amin'ny fandokoana ihany koa. Azo vidiana eny an-tsena ny masomboly hybride, saingy nilaza i Chandra Kala fa manamboatra loko ratsy kokoa (mora miofo) izy ireny.
“Nanenona akanjo maro aho, indrindra fa ho an’ny havako” hoy izy. Taloha i Chandra Kala nahazo 200 hatramin'ny 500 ropia (1,7 hatramin'ny 4,2 dolara amerikana) amin'ny fanaovana petani iray. Ankehitriny, mahazo Rs 1,000 (8,4 dolara amerikana) isaky ny petani izy, saingy tratran'ny fahanterana izy ary tsy dia manenona matetika noho ny tsy fahitany tsara.
Hatramin’ny nahafatesan’ny vadiny dia nikarakara ny zanany roa vavy sy ny zanany roa lahy tamin’ny vola azony tamin’ny fanenomana i Chandra Kala. Zavakanto tsy vitan’ny hoe fiveloman’i Chandra Kala fotsiny izy io fa fomba fiainany mihitsy. Izy no nanamboatra ny ankamaroan'ny akanjo tao an-tranon'ny fianakaviany.
“Hatramin’ny nianarako nanenona, dia akanjo vitsy tsy nataoko ihany no ananako”, hoy izy. “Nahoana aho no hividy amin'ny hafa raha manana fahaiza-manao manamboatra akanjo amin'ny tanako?”